Sida loo Beddelaan 8mm in Qaabka DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo rogo ama cajalado fiidiyo 8mm in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Maqaalkani waxa uu inta badan ku bara sidii aad si loogu badalo cajalado fiidiyo 8mm in DVD u gurmad.
Cajalado 8mm xaqiro waqti aad video xusuus yihiin khatar. Cajalado 8mm bilaabaan in ay nabaad dareemi ka dib sano cajalado 8mm si gurmad oo kaliya 5 by diinta digital.
DVD waa digital oo la koobiyeyn karaa iyada oo aan khasaaro tayada wax. Si ka duwan cajalad 8mm, DVD khasab ma aha in la rewound oo aad si fudud u daawan kartaa xasuus qoyska jecel in ka badan iyo in ka badan. Plus, DVD-qaato oo meel ka yar cajalado 8mm si aad u fara badan oo qolka leeyihiin in ka qoyska video xusuus. Waxaa jira layaabna ma leh sababta dad badan oo jeclaan lahaa in ay nuqul ka mid ah cajalado ay 8mm on DVD ah ee si fudud dib u eegto mar walba.
Si loogu badalo cajalado fiidiyo 8mm in DVD la eber tayada khasaaro, halkan waxaan ku talinaynaa 8mm ah in DVD gubi - Wondershare DVD Creator (Windows 8 taageeray), si ay kaaga caawiso la video digital in DVD diinta ka qaban ka dib markii cajalad 8mm waa diinta digital. Marka hore, waxaad u baahan tahay si ay u gudbiyaan cajalado 8mm si aad u computer (waxaad baran kartaa sida loo sameeyo in Part 1). Haddii faylal ay horey u yihiin kombiyuutarka, si toos ah iyaga oo aad u bedeli karaan si DVD, ku cad Qaybta 2.
Qaybta 1. Transfer cajalado 8mm si aad u computer
Qaybta 2. Sida loo Beddelaan 8mm in DVD
Waxaa jira siyaabo badan in ay qabsadaan videos ka cajalado 8mm in computer, sida kaadh qabashada ama fiidiyo digital. Hore wuxuu u baahan yahay hardware dheeraad ah oo computer oo degdeg ah oo ku filan. Laakiin haddii aad leedahay fiidiyo Digital8 ama fiidiyo ah digital la pass analog marayo ama awooda qabsaday, waxaad isticmaali kartaa fiidiyo ah si loogu badalo signal analog ku-Daqsi-kaas oo lagu wada koobi Karin computer ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka guud si loogu badalo signal analog inay signal digital kaas oo lagu qaban lahaa la video qabsaday software mid soo socda kaarkaaga qabsaday, VirtualDub (Free) ama software aad ugu jeceshahay.
Tallaabada 1 . Connect ilaha cajalad 8mm (fiidiyo ama ciyaaryahanka), in aad kaarka qabashada kombiyuutarka ama fiidiyo digital (hore u xiran kombiyuutarka) oo isticmaalaya Firewire, cable USB, ama S-video cable.
Tallaabada 2 . Orod software video qabsaday kombiyuutarka.
Talaabada 3 . Gali cajaladda 8mm u geliyey cajalad fiidiyo 8mm ama ciyaaryahan, Oo waxaad heli doontaa kaalinta in cajalad meesha aad rabto in aad bilowdo hawsha qabsashada.
Tallaabada 4 . Dooro midkood "Options" ama "Settings" ee software video-qabsaday iyo in la hubiyo in qaabka wax soo saarka, kaas oo sidoo kale lagu tilmaamay kartaa "qaab qabsaday," waa MPEG-2, sababtoo ah ugu wanaagsan waa in DVD gubanaya.
Talaabada 5 . Dooro "Qabsashada" on software video-qabsashada iyo dooro "Play" ku fiidiyo cajalad 8mm ama ciyaaryahanka. Marka ay dhammaato, footage ka ​​cajalado 8mm noqon doonaa drive computer ee adag.
Talooyin in ay qabsadaan 8mm cajalad video
1. Ma aha in dhamaan kaamirada digital cusub lagama maarmaan aqbali aqbasho analog (fiican si ay u daawadaan tusaalayaasha hoose-dhamaadka).
2. Ka hor qabsaday, si degdeg ah weeraryahan cajalad 8mm dhammaadka cajalad ka dibna dib ugu bilowgii dib u socon hor ciyaaro. Tani waxay u saamixi doono loo maqli siman halka qabsaday video ah.
3. Haddii qalabka ilaha aad leedahay S-Video saarka, waa in aad isticmaasho in halkii kooban (RCA) video saarka. S-Video koriyo sawir tayo ahaan ka fiican yahay kooban video.
4. Hubi in aad haysatid meel ku filan oo ku saabsan wadid aad u adag.
5. badan oo ku saabsan Baro 8mm cajalad video qabsaday .
Ka dib cajalad 8mm waxaa lagu qabtay si ay computer ka, DVD abuure ayaa loo baahan yahay si ay u gubaan video inay DVD ciyaarta ciyaaryahan kasta oo DVD standalone. Wondershare DVD Creator si weyn lagu talinayaa. Labada qeybood oo Windows iyo Mac waxaa laga heli karaa. Haddii aad isticmaalayso Mac a socda Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, heli Wondershare DVD Creator for Mac . Tallaabooyinka loo badalo 8mm in DVD ee Windows (Windows 10 ka mid ah) iyo Mac yihiin ku dhowaad isku mid ah, kaliya aad u hesho version saxda ah sida ay your computer ka dibna raac talaabooyinka si loogu badalo 8mm in DVD.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan 8mm in DVD gubi
Ka dib markii ay soo degsado, fadlan soo dajiyo dibna u abuurtaan. Interface hoose waa waxa adiga kugu saabsan si ay u arkaan waa:
Tallaabada 2. Load videos iyo iyaga xaalkaa
Guji "Import" si dar videos aad u baahan tahay barnaamijka. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, aad astaysto aad videos by falinjeeerka, lana siii, qabsado videos, isagoo intaa ku daray watermarks, sixiddiisa DVD menu iyo wixii la mid ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo Guba 8mm in DVD
Click to ku eegaan natiijada tafatir ah ay dhacdo in aad u hagaajin kara si gaar ah. Ugu dambeyntii, aad riix kartaa "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya.
Talooyin: boos bidix ee disc ayaa lagu muujiyay on bar intii disc hoose; Waxaad dooran kartaa baaxadda DVD gubanaya u dhexeeya "DVD-R4.5G" iyo "DVD-R9.0G"; Tayada wax soo saarka ayaa sidoo kale ilaa aad doorato, waxaad dooran kartaa "taam u disc", "Standard video oo tayo leh" ama "video sare oo tayo leh".
Iyadoo Wondershare xirfad DVD Creator (Windows 8 taageeray), waxaad ka heli doontaa waxa quruxsan fudud si loogu badalo files 8mm in DVD si aad ku raaxaysan kartaa waqti tayo leh daawashada filimaanta qoyskaaga guriga.
About 8mm : kaamirada 8mm isticmaali ah cajalad video yar oo waqti dheer ciyaaro iyo dhawaaqa wax yar ka fiican yahay VHS. Ayaa qaab video 8mm loola jeedaa aan rasmi ahayn si ay seddex noocyo al-la xiriira ee NTSC iyo nidaamyada television Pal / SECAM. Kuwani waa Video8 (analog) qaab asalka iyo bedelka hagaajinta Hi8 (analog iyo digital labadaba), iyo sidoo kale qaab dheeraad ah oo dhawaan loo yaqaan digital Digital8.
Sida loo Guba Netflix Movies in DVDs